Fahapotehan’I Mahamasina :: Hanembantsembana ny Barea ny haratsin’ny kianja • AoRaha
Ahiana tsy hitondra tombony ho an’ny Barean’i Madaga­sikara ny fandraisana ny lalao mandroso eto amin’ny taniny noho ny haratsian’ny kianjaben’i Mahamasina, izay hihaonana amin’i Etiopia amin’ny sabotsy ho avy izao. Miharihary, noho ny tsy fito­viam-pijery amin’ny lafiny fampandrosoana ny fanatanjahantena, ny haratsian’ity kianja monisipaly ity. Zary vato misakana amin’ny fikojakojana sy fanamboarana an’io fotodrafitrasa io ny ekipan’ny kaominina Antananarivo renivohitra(CUA) ankehitriny. Manaporofo izany ny filazan’izy ireo ny tsy mbola maha laharam-pahamehana ny fanavaozana ny kianjaben’i Mahamasina, taorian’ny fampanantenana nataon’ny fitondram-panja­kana rehefa avy namiratra tamin’ ny CAN tany Ejipta ny Barea.
Efa tamin’ny taona 1999 no tokony nasiam-panavao­zana ny kianjaben’i Maha­masina. Nisedra fandavana avy amin’ny mpiadidy ny tanàna tamin’izany fotoana anefa io fandaharanasa io. Vao volana vitsy izay no nanaovan’ny ekipan’ny CUA amperinasa resabe momba an’ilay helikôptera nisidina tetsy Mahamasina, ka nanehoan’izy ireo ny tsy fankasi­trahany ny fanomezan-tanan’ ny fanjakana amin’ny fanamboarana an’io kianja, eny fa na dia tsy ny momba an’i Maha­masina velively aza no anton-dian’ilay angidimby.
Zara fa voakitika ity hany kianja lehibe andraisana lalao iraisam-pirenena eto Madagasikara ity tamin’ny fitantanan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny ekipany, toa an-dRandriama­sinoro Tahiry Ny Rina, izay sekretera jeneralin’ny CUA, talohan’izao maha kandidà ho ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra azy izao. Vao mainka potika tanteraka ny kianja. Manginy fotsiny ny faharatsian’ireo fotodrafitrasa, toy ny trano fivoahana sy ny efitrano natokana ho an’ireo mpilalao.
Ahiana hiantraika amin’ ny herijikam-pahombiazan’ ny ekipam-pirenena malagasy, amin’izao lalao hatao mano­lo­ana an’i Etiopia amin’ny sabotsy izao, io tsy firaharahana ny fotodrafitrasam-panatanjahantena eto an-drenivohitra io. Mpilalao efa zatra kianja manara-penitra ny ankamaroan’ireo mpila ravinahitra, izay mandrafitra ny Barea. Tokony ho nanana tombony betsaka isika amin’ny fizarana ny toetry ny kianja, saingy mety hitovy fahasahiranana amin-dry zareo etiopiana ihany.
Etsy ankilany, hanampy trotraka ny vinavinan’ny mety ho toetr’andro. “Tombanana hanorambe amin’ny sabotsy ho avy izao”, hoy Ratovoari­soa Lovandrainy, teknisiana avy amin’ny sampana famanta­rana ny mety ho toetry ny andro.
Omaly vao tena nanomboka nizatra ny kianjaben’i Mahamasina ny Barean’i Madagasikara. Maro tamin’ ireo mpilalao no tsikaritra ho sahirankirana, na dia amin’ny fifehezana ny fitonton’ny baolina fotsiny aza. “Miezaka ihany izahay ny hametraka fomba filalao amin’ity kianja ity”, hoy fotsiny i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea.
Baolina kitra – UFFOI U15 :: Nandresy an’i Kaômoro i Madagasikara